संशयमा चिनियाँ राष्ट्रपतिको नेपाल भ्रमण - China Radio International
(GMT+08:00) 2016-10-27 14:53:30
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले आफ्नो कार्यकालमा चीनका राष्ट्रपति सी चिन फिङलाई नेपाल भ्रमण गराउने लक्ष्य राखेका थिए। माओवादी केन्द्रका कतिपय नेताहरुले नै चिनियाँ राष्ट्रपतिको नेपाल भ्रमणले दालाहको कार्यकालको सफलताको मापन हुने दावी गरेका थिए। केपी ओली प्रधानमन्त्री हुँदाकै समयमा आगामी असोजमा चिनियाँ राष्ट्रपति सीको भ्रमण निश्चित जस्तै बनेको थियो। तर अहिले आएर आगामी असोजमा हुने भनिएको चिनियाँ राष्ट्रपतिको नेपाल भ्रमणमा दुविधा उत्पन्न भएको छ। चिनियाँ राष्ट्रपतिको नेपाल भ्रमण प्रधानमन्त्री दाहालको उपलब्धि र भ्रमण रद्द उनको क्षति होइन भन्ने कुरा नेपाली नेताहरुले बुझ्न आवश्यक छ। जुनसुकै समयमा भए पनि चिनियाँ राष्ट्र प्रमुखको नेपाल भ्रमण नेपालका लागि दीर्घकालीन प्रभाव र अन्तर्राष्ट्रिय समाजमा नेपाललाई थप सफल बनाउने एउटा माध्यम हुनेछ भने भ्रमण रद्द नेपालकै लागि अभिषाप हुनेछ।
सन् १९९६ मा तत्कालीन चिनियाँ राष्ट्रपति च्याङ चमिनले नेपालको भ्रमण गरेका थिए। त्यसयता बीस वर्षसम्म कुनै पनि चिनियाँ राष्ट्रपतिले नेपालको भ्रमण गरेका छैनन्। चीनका वर्तमान राष्ट्रपति सी चिनफिङ सत्तामा आउनासाथ उनले छिमेकी मुलुकसँग घनिष्ट र सुमधुर कुटनीतिक सम्बन्ध राख्ने नीतिको घोषणा गरेका थिए। छिमेकी दर्‍हो भयो भने मात्र आफू दर्‍हो भइन्छ, यदि छिमेकमा अस्थिरता छायो भने त्यसको छायामा आफूमा पनि पर्छ भन्ने भनाइ चीनमा निकै लोकप्रिय छ। परम्परागत यही भनाइलाई चीनले आफ्नो परराष्ट्र कुटनीतिमा पनि प्रयोग गर्दै आएको छ। फलस्वरुप उसले कोरिया प्रायद्विपको द्वन्द्व र अफगानिस्थानको द्वन्द्वलाई गम्भीर चासो राखी समाधानका लागि विविध राजनीतिक उपाय लगाउँदै आएको छ।
सत्तामा आएपछि चिनियाँ राष्ट्रपतिले ४२ भन्दा बढी मुलुकको भ्रमण गरिसकेका छन्। सन् १९४९ मा चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टी सत्तामा आएपछि सबैभन्दा धेरै विदेश भ्रमण गर्ने नेतामा राष्ट्रपति सी पर्दछन्। अघिल्ला राष्ट्रपति हु चिन थावोले दस वर्षको कार्यकालमा जम्मा सातवटा देशको मात्र भ्रमण गरेका थिए भने पहिलो कार्यकाल पनि पूरा नहुँदै सीले त्यसको छ गुणा बढी देशको भ्रमण गरेका छन्। चिनियाँ राष्ट्रपति धेरै विदेश भ्रमण गर्ने विश्वका नेताहरुमा अग्रभागमा आउँछन्। उनले दक्षिण एसियाका अधिकांश छिमेकी मुलुकहरुको पनि भ्रमण गरिसकेका छन्। तर दसकौँदेखि समुधुर सम्बन्ध रहँदै आएको र सफल कुटनीतिक सम्बन्धले ६१ वर्ष पारगरिसकेको घनिष्ट छिमेकी मुलुक नेपालको भ्रमण गर्ने कुरामा किन ढिलाइ भयो? यो प्रश्न चीनका लागि जति गम्भीर छ त्योभन्दा बढी गम्भीर नेपालका लागि छ। लामो समयदेखि छिमेकी मित्रराष्ट्रका प्रमुखलाई नेपाल भ्रमण गराउन नसक्नु नेपालको कुटनीतिक असफलताको मापन हो।
तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको चीन भ्रमण आफैँमा कोशेढुङ्गा स्थापित भएको छ। वर्षौँदेखि नेपालको वैदेशिक व्यापार र पारवहन भारतवेष्टितबाट भूपरिवेष्ठितमा सरेको छ। यसको सफल कार्यान्वयन केकस्तो हुन्छ त्यो त हेर्न बाँकी नै छ तर थालनी भने आफैँमा निकै साहसिलो र महत्वपूर्ण रहेको छ। नेपालले वर्षौँ पहिलेदेखि गर्न चाहेको तर आँट गर्न नसकेको विषय थियो चीनसँगको पारवहन सम्झौता। भारतको नाकाबन्दी र नेपालको इच्छाशक्तिको फ्युजनमा यो उपलब्धि भएको हो भन्ने कुरामा कसैको दुईमत छैन।
चीनसँग पारवहन सम्झौता हुँदा जस्तो उत्साह र उमङ्ग छाएको थियो त्यो कार्यान्वयन गर्नका लागि भने उत्साह सेलाउँदै गयो। विभिन्न तहमा हुने प्रोटोकलका लागि नेपालले चासो देखाएन अथवा भ्याएन। विभिन्न मन्चहरुमा चीनले पारवहन सम्झौताको कार्यान्वयन दुवै देशका लागि महत्वपूर्ण रहेको कुरालाई स्पष्टसँग राख्दै आयो। तर नेपाल चाहिँ आफ्नै राजनीतिक किचलोमा भुलिन थाल्यो। यसैबीच गत असारमा नेपालका परराष्ट्र सचिव शंकर बैरागीले चीनको भ्रमण गर्दा चीनको प्रतिवद्धता र प्रतिक्रिया निकै उत्साही थियो। बैरागीका समकक्षी चिनियाँ परराष्ट्रमन्त्रालयका खोङ युआनयोउले अक्टोबरसम्ममा चीनको उच्च नेतृत्वले नेपालको भ्रमण गर्ने स्पष्ट संकेत गरेका थिए। दुवै देशका कुटनीतिक निकायले यसको तयारी तीब्र बनाउने र भ्रमणलाई घनिभूत रुपमा सफल बनाउने कुराकानी भएको त्यतिबेलै बैरागीले संचारमाध्यमलाई उल्लेख गरेका थिए।
यही बीचमा नेपालमा सरकार परिवर्तनको आँधी चल्यो। एकपटकको आँधी थामिएको केही समयमै अर्को आँधीले केपी ओलीको सरकारलाई ढाल्यो र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालको नेतृत्वमा नयाँ सरकार बन्यो। सरकार फेरिनु नेपालको आन्तरिक मामिला भए पनि यसको पृष्ठभूमिबाट विभिन्न हल्लाहरु छरपस्ट भए। 'चीनसँग भएको पारवहन सम्झौतालाई कार्यान्वयन नगर्ने र आगामी अक्टोबरमा हुने चिनियाँ राष्ट्रपतिको नेपाल भ्रमण रद्द गराउने उद्देश्यबाट सरकार ढालियो' भनेर नेपाल र भारतका संचारमाध्यमले व्यापक रुपमा प्रचार गरे र अहिले पनि गरिरहेका छन्। नेपाली र भारतीय संचारमाध्यममा आएका कुराहरु चीनलाई थाहा नहुने कुरै भएन। थाहा नपाएजस्तो गर्ने तर सूक्ष्म अध्ययन गर्ने चिनियाँ नीति अनुसार नै यसलाई विश्लेषण गर्न थाल्यो।
सरकार परिवर्तन गर्नासाथ प्रधानमन्त्री दाहालका विशेषदूतका रुपमा चीन भ्रमणमा आएका उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री कृष्णबहादुर महराले पनि सरकार परिवर्तनका विषयमा चीनलाई स्पष्ट जवाफसहित आश्वस्त बनाउन सकेनन्। चीनले नेपालमा शान्ति र राजनीतिक स्थिरता भएमा आर्थिक विकास हुन्छ भन्ने सुझाव राख्दै संविधान कार्यान्वय भएको हेर्न चीन इच्छुक छ भन्दा महराले हामी पनि शान्ति र स्थिरताकै पक्षमा छौँ भने। उनलाई आफ्नै बोली आफैँलाई व्यङ्ग्य गरेजस्तो लाग्यो। सरकार परिवर्तनका मुख्य खेलाडी महरा थिए र उनले पुष्पकमल दाहाललाई उक्साएका थिए भन्ने कुरा चिनियाँ नेतृत्वमा पहिले नै पुगिसकेको थियो। महराले चिनियाँ परराष्ट्रमन्त्री वाङ यी र प्रधानमन्त्री ली ख छ्याङसँग भेट गर्दा भन्नु पर्ने खासै विषय थिएन। चिनियाँ राष्ट्रपति सीले अक्टोबरमा भ्रमण गरिदिएमा आफ्नो पार्टीको शाख बच्ने थियो भन्ने मनसायलाई महराले बाहिर व्यक्त त गरेनन् तर उनले चीनको असन्तुष्ट राम्ररी थाहा पाए। दुवै नेतासँगको भेटपछि महराले बेइजिङमा भने 'नेपालका पुराना मित्र प्रोफेसर वाङ्ग हुङ्ग वैले आगामी अक्टोबरमा चिनियाँ राष्ट्रपतिले नेपालको भ्रमण गर्नुहुनेछ भनी मलाई स्पष्ट जवाफ दिनु भएको छ।' यसको अर्थ महरालाई कुनै पनि सरकारी निकायले स्पष्ट जवाफ दिएका थिएनन्। एकजना सेवा निर्वित्त बुद्धिजीवीले मात्र उनलाई भ्रमण हुन्छ भनेर स्पष्ट भनेका थिए। भदौ २५ मा तेस्रो तिब्बत पर्यटन तथा संस्कृति मेलामा भाग लिन ल्हासा आएका महराले चिनियाँ अधिकारीहरुसँग राष्ट्रपति सीको नेपाल भ्रमणलाई लिएर कुरै गरेनन्।
नेपालका लागि चिनियाँ राजदूत ऊ छुन्थाइले नेपालको परराष्ट्रमन्त्रालय र प्रधानमन्त्रीलाई चिनियाँ राष्ट्रपति सीको भ्रमण स्थगित भएको सूचना दिएको भन्दै समाचार सार्वजनिक भएपछि फेरि नेपाल र भारतमा यस बारेमा राम्रै हल्ला चल्यो। यो हल्लाले यतिसम्म भ्रम फिँजायो कि नेपालको कुटनीतिक निकाय कानै नछामिकन कागको पछाडि दौडिन थाल्यो। एकातिर चिनियाँ राजदूतले कुनै त्यस्तो सूचना दिएका छैनन् भन्दै परराष्ट्रमन्त्रालयले विज्ञप्ति निकाल्यो भने अर्कातिर चिनियाँ परराष्ट्रमन्त्रालयका अधिकारीलाई फोन गरेर 'साँच्चै राष्ट्रपतिको भ्रमण स्थगित भएको हो र?' भन्ने जिज्ञासा राख्न खोज्यो। चिनियाँ कुटनीतिज्ञले नेपालमा हुने हल्लालाई स्पष्टीकरण दिने कुरै भएन। हल्लाका भरमा फोन गरेर स्पष्ट हुन खोज्नु नेपालको असफल कुटनीति हो भन्दा अत्युक्ति हुँदैन।
भदौ २७ गते सोमबार चिनियाँ परराष्ट्रमन्त्रालयकी प्रवक्ता ह्वा छुनयिङले नियमित पत्रकार सम्मेलनमा नेपाल प्रसङ्गमा उठेको प्रश्नमा भनिन् 'दुई देशबीचमा कुटनीतिक च्यानलबाट कुराकानी भइरहेको छ। चीनले सधैँ नेपालसँगको सम्बन्धलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेको छ।' उनले राष्ट्रतपिको भ्रमण स्थगित भएको अथवा नभएको बारेमा केही पनि बताइनन्। चिनियाँ परराष्ट्रमन्त्रालयले यसभन्दा अगाडि कहिल्यै पनि चिनियाँ राष्ट्रपतिको नेपाल भ्रमण हुन्छ भनेर कार्यतालिका प्रकाशन गरेको छैन। तसर्थ पनि घोषणै नभएको भ्रमण स्थगित भयो भनेर भनिरहन उनले आवश्यक देखिनन्। कुनै पनि चिनियाँ बुद्धिजीवी र अथवा विश्लेषकहरुले भन्ने गरेको साझा भनाइ पनि उस्तै छ 'नेपाल भ्रमणको मिति घोषणा भएको थिएन र स्थगित गरेको घोषणा पनि होइन। अनुकूल समयमा चिनियाँ नेताले नेपालको भ्रमण गर्नेछन्।'
यतिबेला चीन नेपाल सन्दर्भमा पर्ख र हेरको नीतिमा रहेको छ। नेपालमा हुने राजनीतिक अस्थिरता नै चीनको चिन्ताको विषय बनेको छ। एक वर्षमै दुईदुईपटक सरकार परिवर्तन हुँदा स्वाभाविक रुपमा आपसी सहमति र सम्झौताहरु ओझेलमा पर्छन् अथवा अलमल कायम हुन्छ। नेपालमा राजनीतिक स्थिरता भएमा आर्थिक विकास हुन्छ र चिनियाँ लगानीको पनि सुरक्षा हुन्छ भन्ने चीनको मान्यता छ। नेपालमा हुने राजनीतिक स्थायित्व र आर्थिक विकासले चीनलाई दक्षिण एसिया प्रवेश गर्नका लागि सजिलो हुने गर्छ। केपी ओलीको सरकार कम्तिमा पनि दुई वर्षका लागि हो र त्यसपछि निर्वाचनबाट नयाँ संविधानको कार्यान्वयनसँगै आर्थिक विकास हुने कुरामा चीन ढुक्क थियो। पारवहन सम्झौतापछि चिनियाँ नेतृत्व नेपालप्रति बढी नै आशावादी बनेका थियो। तर जब ओली सरकार ढल्यो र अर्को सरकार पनि नौ महिनाका लागि मात्र बन्यो भन्दा चिनियाँ नेताहरु नेपालको राजनीतिक खिचडी देखेर रनभुल्लमा परेका छन्।
चिनियाँ राष्ट्रपतिको नेपाल भ्रमण हुने अथवा नहुने अझै निश्चित भएको छैन। नेपालले जस्तो हल्लाको भरमा चीनले कुटनीति निर्धारण गर्दैन। उसले भित्रभित्रै राम्रो तयारी गरेर मात्र भ्रमण गर्ने मिति निर्धारण गर्छ। त्यो मिति आगामी असोजमै पनि हुन सक्छ अथवा केही पछि धकेलिएको पनि हुन सक्छ। भ्रमण तालिका पहिले नै सार्वजनिक हुँदा तत्कालीन प्रधानमन्त्री वेनच्या पावोको नेपाल भ्रमण स्थगित भएको तीतो सत्य हामीसँग छँदैछ। मुख्य गरी नेपालको सुरक्षा व्यवस्थामाथि चीन विश्वस्त हुन सकेको छैन। हरेक वर्ष तिब्बती शरणार्थीका नाममा नेपालमा हुने चीन विरोधी गतिविधि र पश्चिमा शक्तिराष्ट्रहरुले यही निहुमा नेपाललाई क्रिडास्थल बनाउँदै आएले चिनियाँ नेताका लागि नेपाल भ्रमण निकै अप्ठ्यारो हुने गर्छ। नेपालको सुरक्षा नीतिमा भएको सानो त्रुटि मात्रले पनि चीनको अन्तर्राष्ट्रिय छवि बिग्रन सक्छ। यस्तो अवस्थामा चाहेर पनि चिनियाँ नेताले नेपालको भ्रमण गरेका छैन। यो पनि नेपालको अर्को कुटनीतिक असफलता हो।
साभारः कान्तिपुर दैनिक। २०७३ भदौ ३१ गते （२०१६ सेप्टेम्बर १६） शुक्रबार।